ပင်စင်လစာတွေနဲ့ မသေခင်ကို နိုင်ငံတော်ကို မလှူပဲ ဆင်းရဲသူတွေကိုလှူချင်လို့ ဆက်သွယ်ပါဆိုတဲ့ အဘိုး
by R Kar July 30, 2020 July 30, 2020 NewsLeaveaComment on ပင်စင်လစာတွေနဲ့ မသေခင်ကို နိုင်ငံတော်ကို မလှူပဲ ဆင်းရဲသူတွေကိုလှူချင်လို့ ဆက်သွယ်ပါဆိုတဲ့ အဘိုး
ပရိသတ်ကြီးရေ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက် တိုက်ခဲ့တဲ့ အဘတစ်ယောက်က သူ့ရဲ့လစာတွေကို လှူချင်ပါတယ်ဆိုပြီးလူမှုကွန်ရက်မှာ ခုလိုသတင်းတက်နေတာတွေ့ရပါတယ်…
ရဲဘော် ၃ ကျိပ် အဖွဲ့ဝင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့အတူ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့အဘပါအဘက သူမသေခင်မှာ သူရဲ့ ပင်စင်လစာတွေကို နိုင်ငံတော်ကို မလှူပဲ ဆင်းရဲချို့တဲ့ ပြီး အိမ်ပိုင်မရှိကျူးကျော်နေရတဲ့ ပြည်သူတွေကို လှူချင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်
အဘမသေခင် အဘရဲ့ ဆန္ဒလေးပြည့်သွားအောင် ဒီ Post ကို Group တွေမှာရှဲခြင်းဖြင့် ကုသိုလ်ယူလိုက်ပါ။ ကုသိုလ်လည်းရ ဝမ်းလည်း ဝဆိုသလို အဘရဲ့ နေရပ်လိပ်စာကတော့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ၈၈ ရပ်ကွက် သစ္စာလမ်း ၆၄/ခ တိုက် A ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဘ ဆီကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ ။ Phone contact …09954166014” ဆိုပြီး ပြန့်နေတာပါ…
ဘာပဲပွောပွော လှတျလပျရေးအတှကျ တဈထောငျ့တဈနရောကနပေါဝငျ ကွိုးပမျးခဲ့ပွီး ခုလညျးပဲ ပွညျသူ့အကြိုးကိုထမျးဆောငျခငျြတဲ့ အဘိုးအတှကျ ဂုဏျပွုပေးခဲ့ကွပါအုံးနျော..
ပငျစငျလစာတှနေဲ့ မသခေငျကို နိုငျငံတျောကို မလှူပဲ ဆငျးရဲသူတှကေိုလှူခငျြလို့ ဆကျသှယျပါဆိုတဲ့ အဘိုး
ပရိသတျကွီးရေ မွနျမာ့လှတျလပျရေးအတှကျ တိုကျခဲ့တဲ့ အဘတဈယောကျက သူ့ရဲ့လစာတှကေို လှူခငျြပါတယျဆိုပွီးလူမှုကှနျရကျမှာ ခုလိုသတငျးတကျနတောတှရေ့ပါတယျ…
ရဲဘျော ၃ ကြိပျ အဖှဲ့ဝငျ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးနဲ့အတူ တိုကျပှဲဝငျခဲ့တဲ့အဘပါအဘက သူမသခေငျမှာ သူရဲ့ ပငျစငျလစာတှကေို နိုငျငံတျောကို မလှူပဲ ဆငျးရဲခြို့တဲ့ ပွီး အိမျပိုငျမရှိကြူးကြျောနရေတဲ့ ပွညျသူတှကေို လှူခငျြတယျလို့ ပွောပါတယျ
အဘမသခေငျ အဘရဲ့ ဆန်ဒလေးပွညျ့သှားအောငျ ဒီ Post ကို Group တှမှောရှဲခွငျးဖွငျ့ ကုသိုလျယူလိုကျပါ။ ကုသိုလျလညျးရ ဝမျးလညျး ဝဆိုသလို အဘရဲ့ နရေပျလိပျစာကတော့ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးဒဂုံဆိပျကမျးမွို့နယျ ၈၈ ရပျကှကျ သစ်စာလမျး ၆၄/ခ တိုကျ A ပဲဖွဈပါတယျ။
အဘ ဆီကိုဆကျသှယျလိုကျပါ ။ Phone contact …09954166014” ဆိုပွီး ပွနျ့နတောပါ…
ဘာပဲပှောပှော လှတလြပရြေးအတှကြ တဈထောင့တြဈနရောကနပေါဝငြ ကှိုးပမြးခဲ့ပှီး ခုလညြးပဲ ပှညသြူ့အကွိုးကိုထမြးဆောငခြငွတြဲ့ အဘိုးအတှကြ ဂုဏပြှုပေးခဲ့ကှပါအုံးနြော..
ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ လော့ဒေါင်း ချထားခြင်းသည် ကိုဗစ်ထက် ကလေး များကို ပို၍ ထိခိုက်စေဟုပြော
by R Kar July 30, 2020 July 30, 2020 NewsLeaveaComment on ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ လော့ဒေါင်း ချထားခြင်းသည် ကိုဗစ်ထက် ကလေး များကို ပို၍ ထိခိုက်စေဟုပြော
ကမ်ဘာ့ ကနျြးမာရေးအဖှဲ့မှ လော့ဒေါငျး ခထြားခွငျးသညျ ကိုဗဈထကျ ကလေး မြားကို ပို၍ ထိခိုကျစဟေုပွော
ဝင်ငွေပါ မရှိတော့တာကြောင့် ငွေရေးကြေးရေး အတွက်စိုးရိမ်နေရတဲ့ အကြောင်း ရင်ဖွင့်လာတဲ့ အဆိုတော်သားငယ်
by R Kar July 30, 2020 July 30, 2020 Cele NewsLeaveaComment on ဝင်ငွေပါ မရှိတော့တာကြောင့် ငွေရေးကြေးရေး အတွက်စိုးရိမ်နေရတဲ့ အကြောင်း ရင်ဖွင့်လာတဲ့ အဆိုတော်သားငယ်
ဝငျငှပေါ မရှိတော့တာကွောငျ့ ငှရေေးကွေးရေး အတှကျစိုးရိမျနရေတဲ့ အကွောငျး ရငျဖှငျ့လာတဲ့ အဆိုတျောသားငယျ
ပြီးခဲ့တဲ့ အချစ်ရေး နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး နောက်ကြောင်း ပြန်မလှည့်ပါဘူးလို့ ဆိုလာတဲ့ နန်းဆုရတီစိုး
by R Kar July 29, 2020 July 29, 2020 Cele NewsLeaveaComment on ပြီးခဲ့တဲ့ အချစ်ရေး နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး နောက်ကြောင်း ပြန်မလှည့်ပါဘူးလို့ ဆိုလာတဲ့ နန်းဆုရတီစိုး
မင်းသမီးချောလေးနန်ူးဆုရတီစိုးကတော့ လက်ရှိ မှာတော့ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းသာမက ဂီတပိုင်းမှာလည်း ထိုးဖောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေသူပါ တေးရေးဝေကြီး ရေးပေးထားတဲ့ သူမရဲ့ ” မြန်မာပြည်ကြီးထဲမှာ” သီချင်းကလည်း ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ပါးစပ်ဖျားမှာ စွဲကျန်ရစ်စေတဲ့ သီချင်းလေး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မကြာသေးမီကလည်းသီချင်းအသစ်လေးကို ပရိသတ်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးထား ပါသေးတယ်။
နန်းဆုက အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း အဆိုတော် G-fatt နဲ့ ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတာပါ။ နှစ်ယောက်သား အချိန်တော်တော်များကို အတူတူဖြတ်သန်းပြီးမှ ရုတ်တရက် လမ်းခွဲ ပြတ်ဆဲခဲ့တာပါ။ ယခုအချိန့ထိပြန်လည်ပေါင်းဆည်းစေချင်တဲ့ ပရိသတ်တွေရှိကြသေးပေမာ့်ဘသူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ အရာအားလုံးကို မေ့ပစ်ပြီး ရှေ့ဆက်သွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နန်းဆုကတော့ သူမရဲ့အချစ်ရေး နဲ့ပတ်သတ်ပြီးပြောပြလာပါတယ်။
“အချစ်ရေး နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပျော်ရွှင်နေရပါတယ်။ အတွေ့အကြုံတွေ သင်ခန်းစာ ယူပြီး အချစ်ရေး ကို ရှေ့ဆက် သွားမယ် နောက်ကြောင်း ပြန်မလှည့်ပါဘူး။မင်္ဂလာ သတင်းတွေ ရှိလာရင် ပရိသတ်ကို ပြောမှာပါ” လို့ ပြောလာပါတယ်။ နန်းဆုကတော့ အခုချိန်ထိတော့ ပရိတ်သတ်တွေကို အချိန်ပေးပြီး အချစ်သစ် ကိုမရှာဘဲအေးအေးဆေးဆေးနေလျက်ရှိပါတယ်။
ပွီးခဲ့တဲ့ အခဈြရေး နဲ့ ပတျသတျပွီး နောကျကွောငျး ပွနျမလှညျ့ပါဘူးလို့ ဆိုလာတဲ့ နနျးဆုရတီစိုး
မငျးသမီးခြောလေးနနျူးဆုရတီစိုးကတော့ လကျရှိ မှာတော့ သရုပျဆောငျပိုငျးသာမက ဂီတပိုငျးမှာလညျး ထိုးဖောကျနိုငျအောငျကွိုးစားနသေူပါ တေးရေးဝကွေီး ရေးပေးထားတဲ့ သူမရဲ့ ” မွနျမာပွညျကွီးထဲမှာ” သီခငျြးကလညျး ပရိတျသတျတှရေဲ့ ပါးစပျဖြားမှာ စှဲကနျြရဈစတေဲ့ သီခငျြးလေး ဖွဈခဲ့ပါတယျ။ မကွာသေးမီကလညျးသီခငျြးအသဈလေးကို ပရိသတျတှကေိုမိတျဆကျပေးထား ပါသေးတယျ။
နနျးဆုက အားလုံးသိတဲ့အတိုငျး အဆိုတျော G-fatt နဲ့ ခဈြသူတှဖွေဈခဲ့ကွတာပါ။ နှဈယောကျသား အခြိနျတျောတျောမြားကို အတူတူဖွတျသနျးပွီးမှ ရုတျတရကျ လမျးခှဲ ပွတျဆဲခဲ့တာပါ။ ယခုအခြိန့ထိပွနျလညျပေါငျးဆညျးစခေငျြတဲ့ ပရိသတျတှရှေိကွသေးပမေျာ့ဘသူတို့နှဈယောကျကတော့ အရာအားလုံးကို မပေ့ဈပွီး ရှဆေ့ကျသှားနကွေတာဖွဈပါတယျ။နနျးဆုကတော့ သူမရဲ့အခဈြရေး နဲ့ပတျသတျပွီးပွောပွလာပါတယျ။
“အခဈြရေး နဲ့ ပတျသကျပွီး ပြျောရှငျနရေပါတယျ။ အတှအေ့ကွုံတှေ သငျခနျးစာ ယူပွီး အခဈြရေး ကို ရှဆေ့ကျ သှားမယျ နောကျကွောငျး ပွနျမလှညျ့ပါဘူး။မင်ျဂလာ သတငျးတှေ ရှိလာရငျ ပရိသတျကို ပွောမှာပါ” လို့ ပွောလာပါတယျ။ နနျးဆုကတော့ အခုခြိနျထိတော့ ပရိတျသတျတှကေို အခြိနျပေးပွီး အခဈြသဈ ကိုမရှာဘဲအေးအေးဆေးဆေးနလေကျြရှိပါတယျ။
ငွေတစ်သိန်းတောင် မကိုင်ရတော့ဘူး အမေ့ကို ကြောက်ရလို့ ဆိုလာတဲ့ နေဒွေး
by R Kar July 29, 2020 July 29, 2020 Cele NewsLeaveaComment on ငွေတစ်သိန်းတောင် မကိုင်ရတော့ဘူး အမေ့ကို ကြောက်ရလို့ ဆိုလာတဲ့ နေဒွေး
ငှတေဈသိနျးတောငျ မကိုငျရတော့ဘူး အမကေို့ ကွောကျရလို့ ဆိုလာတဲ့ နဒှေေး
by R Kar July 29, 2020 July 29, 2020 NewsLeaveaComment on COVID-19 ကို MODERNA ကာကွယ်ဆေးဖြင့် မျောက်တွေမှာ စမ်းသပ်လေ့လာမှု အရကာကွယ်နိုင်
COVID-19 ကို MODERNA ကာကှယျဆေးဖွငျ့ မြောကျတှမှော စမျးသပျလလေ့ာမှု အရကာကှယျနိုငျ
၃ပတ်အတွင်း ကျန်းမာရေးအရ ပြင်ဆင်ထားမှု စစ်ဆေးပြီးပါက ရုပ်ရှင်ရုံများ ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပေးမည်
by R Kar July 29, 2020 July 29, 2020 NewsLeaveaComment on ၃ပတ်အတွင်း ကျန်းမာရေးအရ ပြင်ဆင်ထားမှု စစ်ဆေးပြီးပါက ရုပ်ရှင်ရုံများ ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပေးမည်
ကနျြးမာရေးအရ ပွငျဆငျထားမှု စဈဆေးပွီးပါက ရုပျရှငျရုံမြား ပွနျလညျ ဖှငျ့လှဈခှငျ့ပေးမညျ
BRANDED တွေဝယ်သုံးမိတဲ့ အပေါ် သံဝေဂရမိတဲ့ အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း
by R Kar July 29, 2020 July 29, 2020 Cele NewsLeaveaComment on BRANDED တွေဝယ်သုံးမိတဲ့ အပေါ် သံဝေဂရမိတဲ့ အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း
အဆိုရှင် ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းကတော့ ယနေ့ ထက်တိုင် ပရိသတ်တွေကြား နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီးတေးသံရှင်နဲ့ အောင်လနဲ့ အတူ သာယာတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝိုင်းစုဟာ ယခုအချိန်မှာတော့ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ပိုင်းကို ရပ်နားထားပြီး တေးဂီတ ဖန်တီးမှုတွေကိုသာ ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မီဒီယာတွေ့ဆုံပွဲတစ်ခုမှာတော့ ဝိုင်းစုက “အစ်မသာမဖြုန်းခဲ့ရင် ဒီ့ထက်ပိုအဆင်ပြေနေမှာ လို့ သူမကBranded ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူခဲ့တဲ့ အတွက်သံဝေဂရနေတဲ့ အကြောင်း ရင်ဖွင့်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဝိုင်းစုက “ကိုယ်ဖြုန်းခဲ့တဲ့ အရာတွေလည်းရှိတယ်… ငယ်ငယ်တုန်းက လိုချင်တဲ့ စိတ်တွေနဲ့ Brand တွေလျှောက်ဝယ်…နောက်ဆုံး ကျရင် အဲ့ဒါတွေက ဘာမှမဟုတ်ဘူး… လက်ဝတ်လက်စားလို နောက်ပိုင်းပြန်ရောင်းလို့လည်း မရဘူး….. Branded ကလည်း Update အမြဲထွက်နေတာ ဆိုတော့ ဒိတ်အောက်သွားရင် ကိုယ်လည်း မကိုင်ချင်တော့ဘူးလေ…. ပျက်စီးသွား မှာလည်း ဆိုးတော့ သူ့ကို ထိန်းသိမ်းရတာလည်း အလုပ် တစ်ခုဖြစ်နေတယ်….”လို့ ပြောပြလာခဲ့တာပါ။
သူမအနေနဲ့ ဒီလိုတွေ မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် ဒီ့ထက်ပိုပြီး လိုအပ်တဲ့ နေရာတွေကို ပိုလှူနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်း သူမဖြုန်းတီး မိတာတွေကို သံဝေဂရမိတဲ့အကြောင်း ရင်ဖွင့်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။”ငါတချိန်လုံး ဝယ်တယ် တချိန်လုံးသုံးတယ် ပြီးတော့ ဘာမှလည်း မကျန်ဘူးလို့သိလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ဒါတွေကို ရပ်လိုက်တယ်….အမဒါတောင် အွန်လိုင်းက မှာလို့ရတာတွေကို လျှောက်ဝယ်နေ မိသေးတယ်… ဒါပေမယ့်လည်း အခုတော့ အတော်ထိန်းနိုင်နေပါပြီ” လို့ ရှင်းပြလာခဲ့တာပါ။ ဒါကတော့ ပရိသတ်ချစ် အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း ရင်ဖွင့်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ကိုယ့်ဘဝ မှာ ဝိုင်းစုနဲ့ တိုက်ဆိုင်တာမျိုးရှိရင် မျှဝေခဲ့ကြပါအုန်းနော်။
BRANDED တှဝေယျသုံးမိတဲ့ အပျေါ သံဝဂေရမိတဲ့ အကွောငျး ပွောပွလာတဲ့ ဝိုငျးစုခိုငျသိနျး
အဆုတ်တစ်ခြမ်း ပျက်စီးပြီး(၂) လပဲခံမယ်ဆိုတဲ့ လူကို ပြန်လည်ကျန်းမာလာစေတဲ့ မယားကြီးရွက်
by R Kar July 29, 2020 July 29, 2020 HealthLeaveaComment on အဆုတ်တစ်ခြမ်း ပျက်စီးပြီး(၂) လပဲခံမယ်ဆိုတဲ့ လူကို ပြန်လည်ကျန်းမာလာစေတဲ့ မယားကြီးရွက်
အဆုတျတဈခွမျး ပကျြစီးပွီး(၂) လပဲခံမယျဆိုတဲ့ လူကို ပွနျလညျကနျြးမာလာစတေဲ့ မယားကွီးရှကျ
ဆွမ်းတော်တင် လှူဒါန်းပြီးမှ သုံးဆောင်ခြင်းသည် မည်ကဲ့သို့ အကျိုးရရှိပါသလဲ
by R Kar July 29, 2020 July 29, 2020 KnowledgeLeaveaComment on ဆွမ်းတော်တင် လှူဒါန်းပြီးမှ သုံးဆောင်ခြင်းသည် မည်ကဲ့သို့ အကျိုးရရှိပါသလဲ
“ဆွမ်းတော်စွန့်ပြီး စားမိလျှင် အပြစ်ရှိပါသလား?”
ဆွမ်းတော်တင် လှူဒါန်းပြီးမှစားသောက်သုံးဆောင်ခြင်းသည် မည်ကဲ့သို့ အကျိုးရရှိပါသလဲ
အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်တို့ မိသားစုသည် နေ့စဉ် ထမင်းဟင်းနှင့် ရလာသမျှသော ခဲဘွယ်ဘောဇဉ်တို့ကို ဦးဦးဖျားဖျား ဆွမ်းတော်တင်ပြီးမှ စွန့်သည့်အခါ စားသောက်ခဲ့ကြသည်မှာ နှစ်များစွာပင်ရှိပါပြီ။
ဗုဒ္ဓဝေယျာဝစ္စ ပြုကြသူများမှာ ဇနီးနှင့်သမီးများသာ ဖြစ်ကြ၍ ကျန်လူများ အပြစ်ဖြစ်နေကြောင်း သိရှိရသဖြင့် များစွာတုန်လှုပ်မိပါသည်။
မည်သည့် အကြောင်းကြောင့် အပြစ်ဖြစ်ရသည်ကို၎င်း၊ ထိုအပြစ်များ ပပျောက်အောင် မည်သို့ဆောင်ရွက်ရမည်ကို၎င်း၊ ရှင်းလင်းညွှန်ကြားပေးပါဘုရား။
ရာဇဝင်တွင် ပုဂံပြည် အနော်ရထာမင်းက မနူဟာမင်းအား ဘုန်းကံနိမ့်စေရန် သင်ပုတ်ပလ္လင်တွင် စွန့်ပြီးသော ဆွမ်းတော်တင်ကို မနောလင်ပန်း၌ ထည့်၍ ကျွေးသည်ဟူသော စကားမှစ၍ ဆွမ်းတော်တင် စားလျှင် ဘုန်းကံနိမ့်သည်ဟု ပြောစဉ် ဖြစ်နေရပါသည်။
ဝေယျာဝစ္စလုပ်သူ ဆွမ်းတော်တင် စားကောင်းသည် ဟူသော စကားမှာလည်း ဘုရားစေတီတို့တွင် တင်လှူထားသော ဆွမ်းတော်တင်ကို ခရီးသွား၊ စားရမဲ့ သောက်ရမဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များ စားသောက်လိုလျှင် ဤအတိုင်းစားသည်ထက် ဝေယျာဝစ္စလုပ်ကိုင်ပြီးမှ စားသင့်ကြောင်း ပြောဆိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မိမိတို့ တစ်အိမ်လုံး စားသောက်မည့် ထမင်းဟင်းအားလုံးကို ဘုရားကိုလှူပြီးမှ စားသောက်ခြင်းမျိုးကား ရှာမှရှားသော စေတနာသဒ္ဓါမျိုး ဖြစ်ပါသည်။မည်သို့မျှ အပြစ်မရှိပါ။
အများအားဖြင့် စတိသဘောမျိုးသာ ပန်းကန်ငယ်၊ ခွက်ငယ်တို့ဖြင့် ဆွမ်းတော်တင်လေ့ရှိကြသည်။
ဒီမိသားစုကျတော့ရှိသမျှ ထမင်းအားလုံးကိုလှူဒါန်းပြီးမှ စားသောက်ကြသည်ဟုသိရသဖြင့် သာဓုခေါ်မိပါသည်။
ဘုရားလက်ထက်က ပဏ္ဍိတသာမဏေအလောင်း ပဋိသန္ဓေယူသောအခါမိခင်က ဘုရား ရဟန္တာတို့အား လှူဒါန်းပြီးမှ ဆွမ်းကြွင်း ဆွမ်းကျန်ကို စားလိုသော ချင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ တန်ခိုးကြီးသော ရဟန္တာ ဖွားမြင်မည့် အတိတ်ဖြစ်၍ အလွန်ကောင်းမွန်ကြောင်း ဓမ္မပဒ အဋ္ဌကထာတွင်ပါပါသည်။
ရှေးဆရာတော်ကြီးများသည် ရသမျှ ဆွမ်းတော်တင် ဘုရားလှူပြီးမှ စားသောက်သော အလေ့အထ ရှိပါသည်။ မန္တလေးတွင် စာသင်သားဘ၀ စာသင်စဉ်က ဆွမ်းခံအပြန် သပိတ်ရော ဆွမ်းဟင်းအားလုံး မဟာမြတ်မုနိဘုရားတွင် တင်လှူပြီး အချိန်ရသမျှ တရားထိုင်ခဲ့၍ နောက်မှ သပိတ်ကို ပြန်စွန့်ယူပြီးစားသုံးခဲ့သော ဆရာတော်ကြီးများယခုအခါ သာသနာတော်တွင် ရှေ့တန်းရောက် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ ဖြစ်၍နေကြပေပြီ။
ထို့ကြောင့် စားသောက်ဖွယ်အားလုံး လှူဒါန်းပြီးမှ စားခြင်း၊ မွှေးကြိုင်လှပသော ပန်းများကို ဘုရားလှူပြီးမှ ပန်ဆင်ခြင်းတို့မှာ ကဲ့ရဲ့ဖွယ်မဟုတ်၊ ချီးမွမ်းဖွယ်၊ အတုယူဖွယ်သာ ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားလိုက်ပါသည်။
ဆှမျးတျောတငျ လှူဒါနျးပွီးမှ သုံးဆောငျခွငျးသညျ မညျကဲ့သို့ အကြိုးရရှိပါသလဲ
“ဆှမျးတျောစှနျ့ပွီး စားမိလြှငျ အပွဈရှိပါသလား?”
ဆှမျးတျောတငျ လှူဒါနျးပွီးမှစားသောကျသုံးဆောငျခွငျးသညျ မညျကဲ့သို့ အကြိုးရရှိပါသလဲ
အရှငျဘုရား၊ တပညျ့တျောတို့ မိသားစုသညျ နစေ့ဉျ ထမငျးဟငျးနှငျ့ ရလာသမြှသော ခဲဘှယျဘောဇဉျတို့ကို ဦးဦးဖြားဖြား ဆှမျးတျောတငျပွီးမှ စှနျ့သညျ့အခါ စားသောကျခဲ့ကွသညျမှာ နှဈမြားစှာပငျရှိပါပွီ။
ဗုဒ်ဓဝယြောဝစ်စ ပွုကွသူမြားမှာ ဇနီးနှငျ့သမီးမြားသာ ဖွဈကွ၍ ကနျြလူမြား အပွဈဖွဈနကွေောငျး သိရှိရသဖွငျ့ မြားစှာတုနျလှုပျမိပါသညျ။
မညျသညျ့ အကွောငျးကွောငျ့ အပွဈဖွဈရသညျကို၎င်းငျး၊ ထိုအပွဈမြား ပပြောကျအောငျ မညျသို့ဆောငျရှကျရမညျကို၎င်းငျး၊ ရှငျးလငျးညှနျကွားပေးပါဘုရား။
ရာဇဝငျတှငျ ပုဂံပွညျ အနျောရထာမငျးက မနူဟာမငျးအား ဘုနျးကံနိမျ့စရေနျ သငျပုတျပလ်လငျတှငျ စှနျ့ပွီးသော ဆှမျးတျောတငျကို မနောလငျပနျး၌ ထညျ့၍ ကြှေးသညျဟူသော စကားမှစ၍ ဆှမျးတျောတငျ စားလြှငျ ဘုနျးကံနိမျ့သညျဟု ပွောစဉျ ဖွဈနရေပါသညျ။
ဝယြောဝစ်စလုပျသူ ဆှမျးတျောတငျ စားကောငျးသညျ ဟူသော စကားမှာလညျး ဘုရားစတေီတို့တှငျ တငျလှူထားသော ဆှမျးတျောတငျကို ခရီးသှား၊ စားရမဲ့ သောကျရမဲ့ ပုဂ်ဂိုလျမြား စားသောကျလိုလြှငျ ဤအတိုငျးစားသညျထကျ ဝယြောဝစ်စလုပျကိုငျပွီးမှ စားသငျ့ကွောငျး ပွောဆိုခွငျး ဖွဈပါသညျ။
မိမိတို့ တဈအိမျလုံး စားသောကျမညျ့ ထမငျးဟငျးအားလုံးကို ဘုရားကိုလှူပွီးမှ စားသောကျခွငျးမြိုးကား ရှာမှရှားသော စတေနာသဒ်ဓါမြိုး ဖွဈပါသညျ။မညျသို့မြှ အပွဈမရှိပါ။
အမြားအားဖွငျ့ စတိသဘောမြိုးသာ ပနျးကနျငယျ၊ ခှကျငယျတို့ဖွငျ့ ဆှမျးတျောတငျလရှေိ့ကွသညျ။
ရှေးဆရာတျောကွီးမြားသညျ ရသမြှ ဆှမျးတျောတငျ ဘုရားလှူပွီးမှ စားသောကျသော အလအေ့ထ ရှိပါသညျ။ မန်တလေးတှငျ စာသငျသားဘ၀ စာသငျစဉျက ဆှမျးခံအပွနျ သပိတျရော ဆှမျးဟငျးအားလုံး မဟာမွတျမုနိဘုရားတှငျ တငျလှူပွီး အခြိနျရသမြှ တရားထိုငျခဲ့၍ နောကျမှ သပိတျကို ပွနျစှနျ့ယူပွီးစားသုံးခဲ့သော ဆရာတျောကွီးမြားယခုအခါ သာသနာတျောတှငျ ရှတေ့နျးရောကျ ပုဂ်ဂိုလျကွီးမြား ဖွဈ၍နကွေပပွေီ။
ထို့ကွောငျ့ စားသောကျဖှယျအားလုံး လှူဒါနျးပွီးမှ စားခွငျး၊ မှေးကွိုငျလှပသော ပနျးမြားကို ဘုရားလှူပွီးမှ ပနျဆငျခွငျးတို့မှာ ကဲ့ရဲ့ဖှယျမဟုတျ၊ ခြီးမှမျးဖှယျ၊ အတုယူဖှယျသာ ဖွဈကွောငျး ဖွကွေားလိုကျပါသညျ။